Ezekieri 48 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kugovewa kwenyika yacho (1-29)
Magedhi 12 eguta (30-35)
Guta rinonzi “Jehovha Ari Ipapo” (35)
48 “Aya ndiwo mazita emadzinza acho kubva kumuganhu wekuchamhembe: Mugove waDhani+ unoenda wakatevedzana nenzira inoenda kuHetroni uchisvika kuRebhohamati,*+ uchinosvika kuHazari-enani, uchitevedza muganhu weDhamasiko kuchamhembe, pedyo neHamati;+ uye unobva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 2 Mugove waAsheri+ unoganhurana newaDhani kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 3 Mugove waNaftari+ unoganhurana newaAsheri kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 4 Mugove waManase+ unoganhurana newaNaftari, kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 5 Mugove waEfremu unoganhurana newaManase,+ kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 6 Mugove waRubheni unoganhurana newaEfremu,+ kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 7 Mugove waJudha unoganhurana newaRubheni,+ kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 8 Pamuganhu waJudha, kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira, munofanira kupa mupiro wakafara makubhiti* 25 000+ uye wakareba zvakaenzana nemigove yemamwe madzinza kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. Nzvimbo tsvene ichava pakati pawo. 9 “Mupiro wamunofanira kupa Jehovha unofanira kunge wakareba makubhiti 25 000, wakafara makubhiti 10 000. 10 Iyi ndiyo nzvimbo ichava mupiro mutsvene uchapiwa vapristi.+ Ichange yakafara makubhiti 25 000 kuchamhembe, makubhiti 10 000 kumavirira, makubhiti 10 000 kumabvazuva, uye makubhiti 25 000 kumaodzanyemba. Pakati payo ndipo pachava nenzvimbo tsvene yaJehovha. 11 Ichava yevapristi vatsvene vekuvanakomana vaZadhoki,+ avo vakaita basa rangu uye vasina kutsauka pakatsauka vaIsraeri nevaRevhi.+ 12 Vachava nemugove unoganhurana newevaRevhi munzvimbo yakatsaurwa kuti ive chinhu chitsvenetsvene. 13 “VaRevhi vachava nenharaunda inoganhurana neyevapristi, yakareba makubhiti 25 000, yakafara makubhiti 10 000. (Nharaunda yacho yese ichange yakareba makubhiti 25 000, yakafara makubhiti 10 000.) 14 Hapana chikamu chemugove uyu wakanaka kupfuura yese chavanofanira kutengesa, kana kuchinjanisa nechimwe kana kupa mumwe munhu nekuti nharaunda yacho itsvene kuna Jehovha. 15 “Nzvimbo inenge yasara, iyo inotevedza muganhu wakareba makubhiti 25 000 uye yakafara makubhiti 5 000, ichashandiswa neveruzhinji muguta,+ iine dzimba nemafuro. Pakati payo ndipo pachava neguta.+ 16 Aya ndiwo makuriro akaita guta racho: Muganhu wekuchamhembe une makubhiti 4 500, muganhu wekumaodzanyemba une 4 500, muganhu wekumabvazuva une 4 500, uye muganhu wekumavirira une 4 500. 17 Mafuro eguta racho achava makubhiti 250 kuchamhembe, 250 kumaodzanyemba, 250 kumabvazuva, uye 250 kumavirira. 18 “Nzvimbo ichasara ichange yakareba zvakaenzana nemupiro mutsvene;+ ichange iine makubhiti 10 000 kumabvazuva, uye makubhiti 10 000 kumavirira. Ichange yakareba zvakaenzana nemupiro mutsvene uye zvibereko zvayo zvichadyiwa nevaya vanoshanda muguta racho. 19 Vaya vari kushanda muguta racho vanobva kumadzinza ese aIsraeri ndivo vachairima.+ 20 “Mupiro wacho wese une mativi mana akaenzana, rimwe nerimwe riine makubhiti 25 000. Munofanira kupa nzvimbo yacho kuti ive mupiro mutsvene pamwe chete nenzvimbo yeguta racho. 21 “Nzvimbo ichasara kumativi maviri emupiro mutsvene nenzvimbo yeguta racho, ichava mugove wejinda racho.+ Uchange uchitevedza miganhu yakareba makubhiti 25 000 iri kumabvazuva nekumavirira kwemupiro wacho. Mugove wejinda racho uri pakati pemigove yemadzinza maviri. Pakati pawo pachava nemupiro mutsvene nenzvimbo tsvene inenge iine temberi. 22 “Nzvimbo yevaRevhi nenzvimbo yeguta racho zvichava pakati pemugove wejinda. Nharaunda yejinda ichava pakati pemuganhu waJudha+ nemuganhu waBhenjamini. 23 “Kana ari mamwe madzinza asara, mugove waBhenjamini unotangira kumuganhu wekumabvazuva uchinosvika kune wekumavirira.+ 24 Mugove waSimiyoni unoganhurana newaBhenjamini,+ kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 25 Mugove waIsakari+ unoganhurana newaSimiyoni, kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 26 Mugove waZebhuroni unoganhurana newaIsakari,+ kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira.+ 27 Mugove waGadhi unoganhurana newaZebhuroni,+ kubva kudivi rekumabvazuva kusvika kune rekumavirira. 28 Muganhu wekumaodzanyemba uyo uri panoperera mugove waGadhi, uchatangira kuTamari+ uchinosvika kumvura yeMeribhati-kadheshi,+ woenda kuRwizi,*+ wopfuurira kuGungwa Guru.* 29 “Iyi ndiyo nyika yamunofanira kupa madzinza aIsraeri kuti ive nhaka yawo+ uye iyi ndiyo ichava migove yawo,”+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 30 “Idzi ndidzo dzichava nzvimbo dzekubuda nadzo muguta racho: Divi rekuchamhembe richange riine makubhiti 4 500.+ 31 “Magedhi eguta racho achatumidzwa mazita emadzinza aIsraeri. Pamagedhi matatu ari kuchamhembe, rimwe nderaRubheni, rimwe nderaJudha, uye rimwe racho nderaRevhi. 32 “Divi rekumabvazuva richange rakareba makubhiti 4500, uye richava nemagedhi matatu: rimwe nderaJosefa, rimwe nderaBhenjamini, uye rimwe racho nderaDhani. 33 “Divi rekumaodzanyemba richange riine makubhiti 4 500 uye richava nemagedhi matatu: rimwe nderaSimiyoni, rimwe nderaIsakari, uye rimwe racho nderaZebhuroni. 34 “Divi rekumavirira richange rakareba makubhiti 4 500, riine magedhi matatu: rimwe nderaGadhi, rimwe nderaAsheri uye rimwe racho nderaNaftari. 35 “Kupoterera guta racho rese pane makubhiti 18 000. Uye kubvira pazuva iroro guta racho richange rava kunzi Jehovha Ari Ipapo.”+
^ Kureva, Rwizi rweIjipiti.